Wajiga Labaad Ee Wadahadalada Dowladda F.Soomaaliya Iyo Maamulka Somaliland Oo Maanta Ka Furmaya Istambuul |
Wajiga Labaad Ee Wadahadalada Dowladda F.Soomaaliya Iyo Maamulka Somaliland Oo Maanta Ka Furmaya Istambuul
Wejiga Labaad ee wadahadallo fool ka fool ah oo u dhaxeeya gudiyo ka kala socda Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo maamulka waqooyi Galbeed dalkeenna ee Somaliland ayaa saakay si rasmi ah uga furmay Magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Wadahadaladan oo ah kuwo si fool ka fool ah ay isu soo hor fariisan doonaan guddiyada ka kala socda Dowlada Federaalka Soomaaliya iyo Maamulka Somaliland ayaa barqanimada maanta ka furmay magaalada Istambuul ee dalka Turkiga.
Xoghayaha guddiga dowlada u qaabilsan wadahadalaasi Xildhibaan Qaalid Cumar Cali oo isagoo ku sugan magaalada Istambuul wareeysi siiyay Radio Muqdisho ayaa sheegay in wadahadalada maanta ka bilaabmaya Magaalada Istambuul ay yihiin kuwo gaar u ah wufuudda Labada dhinac isagoo intaa ku daray ineysan jirin cid sadaxaad oo ku wehlindoonta Wadahadaladaasi.
Sidoo kale Xildhibaan Qaalid ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in wadahadaladaasi ay noqdoon kuwo la isku fahmo islamarkaana lagu gaaro heshiis taariikhi ah.
Kulanka maanta ka dhacay Istambuul ayaa dabasocda wadahadaladii Bishii March ee sanadkan Dowlada iyo Somaliland ku dhexmaray magaalada Ankara ee caasimada Turkiga.
Dhawaan ka filo shabakada Somalinimo1.com muuqaalka warkaani.